Foto nke mbibi nke Hurricane Andrew kpatara na 1992 | Netwọk Mgbasa Ozi
Na 1992 ihe Ajọ Ifufe Andrew, ajọ ifufe na-emebi ihe nke kpagburu United States na klas 5, nke kachasị elu na ọkwa Saffir-Simpson. Dị ka a pụrụ ịhụ na foto, ike mbibi a oke ihu igwe ọ jọgburu onwe ya.
Ọ kpochapụrụ ihe niile dị n'ụzọ ya: ụlọ, ụgbọ ala ... Ma hapụrụ Ijeri $ 45 na-efu (ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na mpaghara Miami), naanị karịa nke a site n'aka Katrina na 2005. Ọnwụ ndị nwụrụ ruru 23, ọ bụ ezie na ọ ga-akarịrịrị ma ọ bụrụ na emeghị atụmatụ mkpụpụ dị irè.
Andrew bụ ajọ ifufe nke Atọ nke Atọ huru United States. N'ụzọ dị mma, mba ahụ amaraworị ihe ọ na-eme ma kwadebere ya. Laborbọchị Ọrụ Ajọ Ifufe na Camille bụ ndị bu ha ụzọ na 5 na 1935 n'otu n'otu ma dọọ aka ná ntị banyere ihe egwu nke ike kacha ike ebe okpomọkụ.
Ozi ndị ọzọ - Mụọ ihe ị ga - eme n'oge oke ihu igwe
Foto - Oké Ifufe
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Foto » Foto nke mbibi Hurricane Andrew kpatara na 1992